Wasiirka Batroolka: Heshiiska shidaalka waxaa ila ogaa Farmaajo, waxaana lagu qaatay $7 milyan - Caasimada Online
Home Warar Wasiirka Batroolka: Heshiiska shidaalka waxaa ila ogaa Farmaajo, waxaana lagu qaatay $7...
Wasiirka Batroolka: Heshiiska shidaalka waxaa ila ogaa Farmaajo, waxaana lagu qaatay $7 milyan
Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka Batroolka iyo Macdanta ee xukuumadda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa faahfaahin ka bixiyey heshiiska shidaal barista ah ee wasaaradu ay la saxiixatay shirkadda Coastline Exploration Limited (“Coastline”) oo laga leeyahay dalka Mareykanka.
Wasiir Cabdirashiid ayaa sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu la ogaa heshiiskaan oo lagu qaatay 7 Milyan oo dollar, isla markaana uusan garaneyn sababta uu hadda uga hor yimid, isagoo ku macneeyey in culeyska dhanka baraha bulshada ka soo wajahay uu isaga difaacayo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa caawa soo saaray qoraal uu ku shaaciyey in heshiiskaas uusan waxaba ka ogeyn, isla markaana uusan ansax aheyn, wasiirka oo la weydiiyey sababta uu Farmaajo balantii uga baxay hadii uu heshiiskaas la ogaa ayaa ku jawaabay, “Madaxweynaha waxay ila tahay in markii uu baraha bulshada culeyska ka arkay uu dib u gurtay.”
Wasiir Cabdirashiid ayaa sidoo kale sheegay in heshiiskaan uu soo bilaawday sanadkii 2013-kii, xiligaas oo dalka uu hoggaaminayey madaxweyne Xasan Sheekh, isla markaana ay ku jireen dhameystirkii heshiiskaan.
“Waxaan heshiiskaan saxiixay 15-kii bishaan, hadii qalad ku jirana ma aana shaaciyeen, shirkadaan Soomaaliya waxay horay uga heysatay qandaraas ay siisay dowladdii Xasan Sheekh, hadana waan dhameystirnay un, bishii 1-aad ee 2020-kii ayaan Xamar keenay shirkadaha si heshiiskaan aan u kala saxiixano, laakiin dib u dhac farsamo ayuu xiligaan kusoo gaaray,” ayuu yiri Wasiirka Batroolka.
Ugu dambeyntii wasiirka oo faahfaahiyey waxa uu dhigayo heshiiskaan ay la saxiixdeen shirkadaas Shidaalka baarta ayaa sheegay inuu yahay wax soo saar wadaag, shirkadda loo saxiixay u ogolaanaya inay maal-geliso xirmooyin shidaalka Soomaaliya ah, iyadoo saamiga ugu badan ay qaadan doonto Soomaaliya.
“Xirmooyinka aan saxiixnay waxay ku kala yaallaan xeebaha Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, xirmo kasta oo heshiiskaas ah markii la saxiixo waxuu leeyahay lacag hal milyan oo dollar ah, waxuu heshiiskaasi dhigayaa in mudo bil gudaheed ah lacagtaas ay ku soo dhacdo Bangiga Dhexe, dowladda Soomaaliya ayaana iska leh, todoba xirmo ayaan saxiixnay, 7 milyan ayaana bishaan gudaheeda ku soo dhaceysa Bangiga Dhexe,” ayuu yiri Wasiirka Batroolka oo u waramay Idaacadda VOA